China fiberglass self-enamathelayo iteyiphu mveliso kunye nabathengisi Yuniu
Iteyiphu ye-fiberglass yokuncamathela
Iglasi yefayibha yekhabhoni yefayibha yebha yeglasi yeglasi
Imveliso yobuninzi beglasi yefayibha ecekecekileyo
100 gsm / 160gsm Fibreglass enemingxuma
Ubushushu-enganyangekiyo iglasi ifayibha womluki behamba qu eliphezulu ...
I-fiberglass Emulsion e iglasi yeglasi yefayibha mat 450
1200Tex 2400Tex Fibreglass ngqo Ukuhamba ukusuka China
Fibreglass ukuhambisa fiberglass vulu
Imveliso yobunzima 110g 18x14mesh umnatha wefestile emnyango
I-fiberglass ye-self-adhesive tape yenziwe nge-fiberglass mesh njengezinto ezisisiseko kwaye zidityaniswe yi-emulsion yokuzimela Imveliso iyabambelela, iphezulu kulungelelwaniso, kwaye yomelele kuzinzo lwendawo. Yinto efanelekileyo kwishishini lokwakha ukuthintela iintanda eludongeni nakwisilingi.
4.Good kwealkali ukumelana
7.Waterproof & engangenwa
Iteyiphu ye-1.Glass yefayibha nguMlilo, ukufuma kunye nexoshomba, akukho zintanda, amaqamza.
Ibhodi 2.Gypsum komeleza amalunga udaka kunye nokulungisa iintanda, imingxuma eludongeni.
3.Ukudibanisa ibhodi ye-gypsum, ibhodi yamasuntswana, i-hardboard kunye nezinye izinto zeshiti.
4.Ukuhlanganisa amalungu omnyango kunye neefestile zeefestile ezindongeni.
5.Sizing yokuqhekeka, iikona kunye namalungu kwikhonkrithi, imiphezulu yeplasta.
6.Ukuqiniswa okuqhubekayo kweendonga nophahla.
Iphakheji kunye nokuhanjiswa ngenqanawa
Ngokobungakanani be-fiberglass ye-fiberglass, ifilimu yeplastiki, emva koko ifakwe kwiibhokisi.
Zokuthunyelwa: elwandle okanye ngomoya
Iinkcukacha zokuhanjiswa: kwiintsuku ezili-15 ukuya kwezi-20 emva kokufumana intlawulo kwangaphambili
I-Hebei Yuniu iFiberglass Manufacturing Co., Ltd, eyasungulwa ngo-2012, ngumenzi we-fiberglass oqeqeshiweyo kumantla e-China, ebekwe kwi-Guangzong County, kwisiXeko se-Xingtai, kwiPhondo lase-Hebei. Njengomashishini we-fiberglass oqeqeshiweyo, ubukhulu becala wenza kwaye ahambise uluhlu olubanzi lweemveliso ze-fiberglass zohlobo lwe-E, ezinje nge-fiberglass ebalekayo, imicu ye-fiberglass ecoliweyo, i-fiberglass strand mat, i-fiberglass elukiweyo ehambayo, umatshini wenaliti, ilaphu le-fiberglass njalo njalo. kumzi mveliso wokwakha, icandelo lezithuthi, inqwelo moya kunye nendawo yokwakha iinqanawa, ikhemistri kunye nomzi mveliso weekhemikhali, umbane kunye nezinto ze-elektroniki, ezemidlalo kunye nokuzonwabisa, icandelo elivelayo lokhuselo lokusingqongileyo njengamandla omoya, indibaniselwano yokwahluka kwemibhobho kunye nezinto zokugquma ubushushu. iimveliso ziyahambelana nentlaka ezahlukeneyo, ezinje nge-EP / UP / VE / PA njalo njalo.
Inkampani yethu inesebe lethu elikhethekileyo lobuchwephesha emva kokuthengisa, iimveliso zikonwabele udumo oluphezulu kwezasekhaya kwaye zithandwa kwimarike yamanye amazwe nazo. Umsebenzi wethu kukusebenzela ukuthengwa kwezinto ezihlanganisiweyo zehlabathi, ukwenza ubomi babantu bukhuseleke ngakumbi, okusingqongileyo ngakumbi. Ukusukela oko yasekwa ngo-2012, kunye neqela ukuthengisa ogqibeleleyo ekhaya nakumazwe aphesheya iimveliso.Our zithengiswe kumazwe asibhozo anesithandathu ngoku sinesabelo sentengiso eYurophu, eMantla nase Mzantsi Melika, eOstreliya, eAfrika, kuMbindi Mpuma naku Mzantsi-Mpuma. Asiya. Sinike ithuba, kwaye siza kukubuyisela ngolwaneliseko. Sijonge ngokunyanisekileyo ekusebenzeni kunye nawe ngesandla.
1.Yintoni abasebenzi bakho be-R & D? Zithini iziqinisekiso onazo?
Amalungu ama-3 ophando lwamanye amazwe kunye noMbutho woPhuhliso lwezixhobo ezidityanisiweyo zeglasi, ubuchwepheshe be-R & D ephezulu
2.Yintoni umbono wakho wophuhliso lwemveliso?
Yenza ubomi babantu bukhuseleke kwaye bunobuhlobo kwindalo
3.Ungakwazi ukuzisa ilogo yabathengi bakho?
4.Ungazichonga iimveliso zakho?
5.Yintoni isicwangciso sokumiliselwa kwemveliso yakho entsha?
Kukho ukuveliswa kwemveliso entsha kwikota nganye
Egqithileyo Imveliso yobunzima 110g 18x14mesh umnatha wefestile emnyango
Okulandelayo: Fibreglass ngqo ezihamba